Izinto ezi-5 zokubukela kumnyhadala weWWE Fastlane 2018 - Wwe
Izinto ezi-5 zokubukela kumnyhadala weWWE Fastlane 2018
Indawo yokugqibela yokumisa umngxuma kwi-WWE Road eya eWrestleMania 34 iya kuba ngu-Fastlane 2018, oza ngeCawa, nge-11 Matshi.
Kulapho uphawu lweSmackDown luya kuthi luthathe inxaxheba kwinxalenye yokuzibandakanya koonobumba kumdlalo omkhulu wonyaka kunye nokwenza naluphi na utshintsho ngomzuzu wokugqibela kunye nokujika ukugcina abalandeli kwiinzwane zabo.
Okona kuninzi, ukuhlawulwa kwembono nganye kunesishwankathelo sezinto ezithile Iqela lokudala leWWE lizama ukufezekisa kunye namanye amanqaku eebhulethi zokubetha kumanqaku ebali.
Ngombono omncinci wokubona kwangaphambili kunye nokuqikelela okuxubeneyo nokuqiqa okunengqiqo, sinokuzama ukufumana ezona zinto zibalulekileyo eziza kuthi ze-Fastlane ngaphambi kokuba zenzeke.
Nanku ukujonga ezintlanu zezona zinto ziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo kwaye uzijonge xa ​​kuziwa kwinto eza kwehla kwi-Fastlane 2018.
# 5 Umtsalane weendlela ze-AJ kunye neShinsuke Nakamura
Babenomfanekiso kwiwebhusayithi iiveki, ke le ayinzima ukuyichaza.
Ngandlela thile, yeyiphi eyona nto ibalulekileyo ekufuneka ususe kulo msitho kufuneka sonwabe ngomdlalo we-WWE Championship eWrestleMania phakathi kwe-AJ Izitayile kunye no-Shinsuke Nakamura.
Ngokucacileyo, oku kuthetha ukuba iZitayile zigcina isihloko sakhe kwi-Six-Pack Challenge kwaye akukho nto yenzekayo kuNakamura ukumthintela ekusebenziseni kwakhe itayitile yeRoyal Rumble, kodwa loo nto kufuneka ihambe ngaphandle kokuba kuthethwe.
UNakamura ubhukishelwe kumdlalo wokuphosa kunye noRusev apho aya kuphumelela khona ngokuqinisekileyo kwaye ayizukubaluleka, ke eyona nto inokwenene enokuphuma kuloo nto kukuba uya kuba nolunye uloyiso egameni lakhe kunangaphambili ngaphambi kuka-Fastlane.
Kwangokunjalo, izitayile ziya kuba zihambile nomsebenzi onzima wokugcina isihloko sakhe kumdlalo namanye amadoda amahlanu anokuthi wonke abambe kuye nangaliphi na ixesha ngaphandle kokumbetha, ke uya kujongeka omelele eshiya lo msitho.
Ukuba iWWE idlala amakhadi afanelekileyo, enye yezona zinto zibalulekileyo ekubukeni ababukeli xa umcimbi uphelile kukuba babukele ngokwaneleyo ukubenza baqiniseke ukuba Izitayile vs. Nakamura ziya kuba mnandi kakhulu ukubukela.
Shumi elinantlanu OKULANDELAYO
ukuqala kwakhona ukonwaba
james ellsworth vs aj izitayile
ukubaluleka kokufika ngexesha emsebenzini
ungamnceda njani umntu ngokuqhawula umtshato
indlela yokugqitha kwintombazana
ukuphulukana nesazisi sakho kubudlelwane